Maraykanka Oo Xukuumadda Kabul Ka Jartay Dhaqaalihii uu siin jiray. – Shabakadda Amiirnuur
March 24, 2020 4:57 pm by admin Views: 76
Wasiirka arimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo oo booqasho qarsoodi ah ku tagay wadanka Afqaanistaan ayaa kusoo guul dareystay kulamo waan waan ah oo uu ka dhex waday labada madaxweyne ee xukuumadda Kaabul, kuwaas oo mid weliba uu sheeganayo inuu isagu madaxweyne yahay.
Mike Pompeo ayaa kulamo gooni gooni ah wuxuu la yeeshey Ashraf Ghani madaxweynaha xukuumadda Kaabul, iyo Cabdalla Cabdalla oo isaguna sheeganayo inuu yahay madaxweynaha Xukuumadda Kaabul, wuxuuna wasiirku ku guul dareystay in labada madaxweyne uu heshiisiiyo.
Wasiirka arimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay inuu ku guul dareystay in labada nin lagu qanciyo iney dhisaan xukuumad midnimo, islamarkaana mid weliba sheeganayo inuu yahay madaxweynaha.
Safarka Mike Pompeo ee Afqaanistaan oo lagu tilmaamay mid raja beel ah ayaa dowladda Maraykanka waxay shaaca ka qaaday in lacag dhan hal bilyan oo doollar ay ka jartay xukuumadda Afqaanistaan, sanadkan socda ee 2020-ka.
Wuxuu Wasiirku sheegay in lacag intaas kabadan ay ka jari doonaan xukuumadda Kaabul sanadka soo socda ee 2021-da haddii aaney heshiis gaarin labada madaxweyne ee isku heysta hogaaminta xukuumadda Kaabul.
is heysadka Xukuumadda Kaabul waxay imaaneysaa iyadoo uu Maraykanku billaabay inuu isaga baxo wadanka Afqaanistaan oo uu duulaan milliteri ku qaaday 19 sano ka hor, waxaana inkabadan 70% wadanka Afqaanistaan maamula Imaarada islaamiga ee uu hogaamiyo Mowlawi Hibatullaah.